Bizpati.com - Leading Economic Online News Portal From Nepal | मौद्रिक नीतिका लागि बैंकर तथा सरोकारवालाहरुको यस्तो छ सुझाव
बिहिबार यी स्थानमा ६ घण्टा विद्युत आपूर्ति बन्द हुने २३.७३ प्रतिशतले घट्यो सिटिजन्स बैंकको नाफा, लाभांश क्षमता कति ? नबिल बैंकको नाफा ३ अर्ब ५६ करोड, लाभांश क्षमता कति ? रुसले बनाएको खोपको बिरोध गर्नेलाई राष्ट्रपति पुटिनले दिए कडा जवाफ व्यवसायी र कर्मचारीलाई आफ्नै खर्चमा कोरोना परिक्षण गर्न सरकारको आग्रह गैरसरकारी संस्थालाई सासु कोषमा आबद्ध हुन परिषद्को आग्रह चार अर्बको खाद्यान्न किन्दै सरकार दर्ता बिना सञ्चालित दुई उद्योगलाई कारवाही फेरी लकडाउनको झल्को, सवारी पास वितरण बन्द नयाँ व्यवसाय गर्ने महिलाले पाउँछन् यस्ता छुट हातैले भाँचियो जगदम्बाको डण्डी, यसरी ठगिए बालाजुका श्रीकृष्ण (भिडियोसहित) बुक विल्डिङ्गबाट आईपिओ निष्काशन गर्न यी ४ शर्त अनिवार्य बुक विल्डिङ्गको आईपिओ न्युनतम ५० कित्ता पाईने महासंघ चुनावको ‘बेस लाइन’ मोडालिटी तय बुक विल्डिङ्गबाट आईपिओ निष्काशन गर्दा कटअफ मूल्य भन्दा सस्तोमा शेयर पाईने नेपालकै पहिलो स्किम: जहाँ सानो सानो लगानीले पुरा हुन्छन ठुला सपना १ अर्बको लगानीमा खुल्यो कागज उद्योग, आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र क्वेस्ट कलेजबीच सम्झौंता आज ४८४ जनामा कोरोना पुष्टि, ८ जनाको मृत्यु बुधबार काठमाडौँका १३७ जनामा कोरोना पुष्टि
मौद्रिक नीतिका लागि बैंकर तथा सरोकारवालाहरुको यस्तो छ सुझाव
मोहम्मद अज्मत अलि Jun 12, 2020 | 11:25:43 PM
निकै चाँसोको साथ हेरिएको आगामी मौद्रिक नीतिबारे चार्टड एकाउन्टेन्टहरुको छाता संगठन 'नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्टस संघ' (एक्यान) ले ‘मौद्रिक नीति २०७७-७८ अपेक्षा’ को भर्चुअल कार्यक्रम गर्यो।
बिहिबार साँझ ५ नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक, बाणिज्य बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बिकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अर्थशास्त्री, एक्यानका वर्तमान तथा पुर्वअध्यक्ष तथा पदाधिकारी, व्यवसायिक चार्टड एकाउन्टेन्ट, आर्थिक पत्रकारबीच छलफल भयो।
छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापा र ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुवरले आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे प्रस्तुति दिए। कामना सेवा बिकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविन बस्नेतले प्रस्तुतिको टिपोट गर्दै बिकास बैंकले मौद्रिक नीतिमा खोजेको बिषय प्रस्तुत गरे।
कार्यक्रममा एक्यानका अध्यक्ष आनन्द वाग्लेले स्वागत मन्तब्य राख्दै छलफलको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गरे। त्यस्तै छलफलमा आफ्नो स्वागत मन्तब्य राख्दै सिटिजन बैंकका अध्यक्ष राजन सिंह भण्डारीले छोटो भनाई राखे। छलफललाई एक्यानका उपाध्यक्ष रमेश धितालले सहजीकरण गरे भने सानिमा बैंकका सीएफओ तथा चार्टड एकाउन्टेन्ट सरोज गुरागाईंले संचालन गरे।
यस्तो छ आगामी मौद्रिक नीतिबारे सरोकारवालाबीच भएको छलफलको सम्पादित अंश:
राष्ट्र बैकको स्वायत्तता र बिबेकको प्रयोग हुनुपर्छ
राजन सिंह भण्डारी अध्यक्ष सिटिजन बैंक
केन्द्रिय बैंकले आफ्नो भूमिका खेल्न सके कोरोनाले निम्याएको संकटको न्यूनीकरण गर्न धेरै सहज हुनेछ। सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा यथास्तिथि भन्दा भविष्यको राजनीतिसँग जोडिएको भोट लाई पनि हेरिन्छ र त्यहिअनुसार कार्यन्वयन हुन् नसक्ने कार्यक्रम पनि ल्याइन्छ तर केन्द्रिय बैंकले ल्याउने नीति बिशेष हुन्छ।
सरकारले प्रत्येक बाणिज्य बैंकका र बिकास बैंकका शाखाबाट १० र ५ जनालाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ भन्ने नीति ल्याएको छ तर केन्द्रिय बैंकले यसलाई कसरि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेकुराको हेक्का राख्नुपर्छ।
केन्द्रिय बैंकले आफ्नो स्वायत्तता पुष्टि गर्दै आफ्नो बिबेक प्रस्तुत गरेर आगामी बजेट ल्याउनुपर्छ। अहिले बिशेष परिस्तिथि छ त्यसैले यो बेला राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र उसले प्रयोग गर्ने बिबेक हेर्ने मौका पनि हो। मौद्रिक नीतिले वित्तीय सुधार र सुशासनका लागि लेगल फ्रेम वर्कमा पनि सुधार गर्नुपर्छ।
परम्परागत मौद्रिक नीतिले अहिलेको समस्या हल गर्दैन
नर बहादुर थापा, पुर्व कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
परिस्तिथिले नीतिलाई निर्देशन गर्नुपर्छ। नीति ल्याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ख्याल गर्नुपर्छ। अहिले नेपाल मात्र नभई विश्वनै कोरोनाले प्रभावित भएको छ। अहिले स्वास्थ्य संकट देखिएको छ भने यसले आर्थिक संकट र वित्तीय संकट ल्याउन सक्छ। वित्तीय संकट भित्रियो भने यसको रुप भयावह हुन्छ। त्यसैले पनि अबको मौद्रिक नीति बिशेष हुनुपर्छ। अहिलेको संकटलाई परम्परागत मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्दैन।
आगामी बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको चाहना राखेको छ। मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सिमित राख्ने र ७ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ। यसको कार्यन्वयनको पाटो अर्को छलफलको बिषय होला। अब आउने नीति वास्तविक र विश्वास गर्न सक्ने र कार्यन्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्छ। ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने बिषय जस्तो हुनुहुदैन।
सरकारले बैंकहरुलाई बिकासका एजेन्ट जस्तै ठानेर नीति कार्यक्रम ल्याएको छ। बाणिज्य बैंकमाथि धेरै निर्भर रहेको पछिल्लो नीतिले देखाएको छ। वित्तीय क्षेत्रको विकास, वित्तीय क्षेत्रमा जनताको पहुँच, वित्तीय समावेशी जस्ता बिषयमा पनि बाणिज्य बैंक माथि निर्भर रहेको छ। युनिभर्शल बैंकिङ नभनेपनि यात्रा त्यति मोडिएको छ तर यो नेपालको वित्तीय क्षेत्रको लागि ठुलो चुनौती हो।
निजि क्षेत्रको दबाबमा बैंकिङ रहेको छ। निक्षेप, ऋण प्रवाह मात्र नभई बैंकिङमा नै सरकारको स्वामित्व १५ प्रतिशत छ भने निजि क्षेत्रको हिस्सा ८५ प्रतिशत छ। त्यसैले भारतमा सरकारले बैंक मार्फत जे गर्न सक्छ नेपालमा त्यो सम्भव छैन। सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमलाई नेपालका बाणिज्य बैंकका अध्यक्ष र सीईओले पुरा गर्छु साथ दिन्छु भनेपनि बास्तवमा त्यो केहि हुन् सकेको छैन।
बैंकिङ क्षेत्रको संरचनानै बिकासका काममा बैंकमा भर पर्न नसकिने अवस्था हो। अहिले सरकारले ब्याजमा छुट दिने भनेपनि बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको ब्याज काटेर छुट दिएका छन्। ऋणीले ब्याजमा छुट पाउन समय लागेपनि निक्षेपकर्ताको ब्याज घटिसकेको छ। त्यसैले अहिले उद्योगी व्यवसायीले पाएको ब्याज छुट बैंकले दिएका होइनन, निक्षेपकर्ताको लागत हो।
अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा राहत दिनका लागि ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरिएको छैन। तर नेपालमा यो बढी नै भएको छ। राहत दिनलाई निक्षेपकर्ताको ब्याज घटाइनु राम्रो होइन। यसले वित्तीय दमनको अवस्था सृजना हुने खतरा बढेको छ।
बजेटको आधारमा नै मौद्रिक नीति आउनुपर्छ। अहिले स्वदेशमा उत्पादन बढाउने नीति आएको छ। यसको कार्यन्वयनका लागि बैंकमा भएको अधिक तरलता लघुवित्त मार्फत प्रयोग हुनुपर्छ।
वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो भएन भने वित्तीय संकट निम्तिन सक्छ। यस्तो उचित समधान खोजिएन भने कर्पोरेट वार सुरु हुने र धेरै बैंकको अस्तित्व समाप्त हुन् सक्छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिले ग्यारेन्टी मर्जरको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले सिसिडी अनुपातको पनि पुनर्संरचना हुनुपर्छ।
एनएफआरएसको कारण भयंकर नाफा देखिने अवस्था आयो
परशुराम कुवँर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ग्लोबल आइएमई बैंक